ဖုန်းရောင်း / ဝယ် / လဲ / အပေါင် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ဖုန်းရောင်း / ဝယ် / လဲ / အပေါင်
I phone 6s 64 zp/A အလုံးအသစ်တိုင်းသန့်
ဗူးပစ္စည်းစုံ အာမခံ ၁၀ လကျန်
ရောင်းဈေး 390000 ks.
i phone6/ 64 Zp/a
ရောင်းဈေး 290000 ks.
I phone616 LL/A အလုံးသန့်
ရောင်းဈေး 250000 ks.
Mi A1 ram4/ 64 အလုံးအသန့်
ဗူးပစ္စည်းစုံ အာမခံ ၈ လကျန်
ရောင်းဈေး 210000 ks.
Mi max2ram4/ 64 အလုံးအသန့်
ရောင်းဈေး 230000 ks.
Mi 5A ram3/ 32 အလုံးသန့်
ရောင်းဈေး 115000 ks.
Mi 4a ram2/ 16 အလုံးအပွန်းပါ
ရောင်းဈေး 60000 ks.
Huawei gr5 2016 ram2/ 16 အလုံးသန့်
ရောင်းဈေး 110000 ks.
အမည်: ဖုန်းရောင်း / ဝယ် / လဲ / အပေါင်